Izinhlelo ze-iPhone 14 Pro zikhombisa ukuthi ishubile | iPhone News
Izinhlelo ezisolwayo zisanda kuputshuzwa ngezilinganiso zangaphandle ze- I-iPhone 14 Pro. Uma lezi zinhlelo zingokoqobo, sibhekene ne-iPhone ethi ijiyile kuneyandulelayo, futhi ngokugqama kwamakhamera.
Lokho kusho ukuthi uma i-iPhone 14 Pro elandelayo ingafakwanga nekesi, izohlala kude netafula lapho iphumule kuyo ibheke phezulu. Sizobona….
Zisanda kushicilelwa namuhla. Twitter kungaba yini i-schematics enemininingwane ye-iPhone 14 Pro ne-iPhone 14 Pro Max, eveza ukuthi ama-iPhones alandelayo e-Apple asezingeni eliphezulu angafaka okuvelele kwekhamera okugqamile kanye nokwakheka okuphelele. mkhulu.
Ngokwalezi zinhlelo, i-iPhone 14 Pro Max izokala ububanzi obungama-77,58mm, ibe mncane kancane kune-iPhone 13 Pro Max enesilinganiso esingu-78,1mm. Ukwengeza, i-iPhone 14 Pro Max izocishe ifane ne-iPhone 13 Pro Max ngobude, enesilinganiso esingu-160,7mm uma iqhathaniswa ne-160,8mm.
Ngobukhulu, i-iPhone 14 Pro Max izokala i-7,85mm, ijiyile kancane kune-iPhone esezingeni eliphezulu, ekala u-7,65mm nje. Nge-iPhone 13 Pro ne-iPhone 13 Pro Max, i-Apple yenyuse kakhulu usayizi wedokhi yekhamera ngemuva uma iqhathaniswa ne-iPhone 12 Pro. Ngo-2022, i-Apple ibheke ukuphinda umkhuba ofanayo. ngokuqhubekayo ukwandisa ukushuba kokuphuma kwamakhamera.
Nansi indlela uJon Prosser aphupha ngayo ukuthi kuzoba yi-iPhone 14 Pro Max
Okugqamile kwamakhamera kuzoba kukhulu
Idokhi yekhamera ku-iPhone 13 Pro Max ikala nje ukuphakama okungu-3,60mm, ngokususelwa kumhlahlandlela owenziwe i-Apple ukuze abenzi bezesekeli bacatshangelwe. Ngokusekelwe kuhlelo lwe-iPhone 14 Pro Max okwabiwe namuhla, iqhubu lekhamera ku-iPhone 2022 ephezulu lizoba 4,17 mm obukhulu. Idokhi yekhamera ngokwayo ngemuva kwe-iPhone izophinda ikhule ngosayizi cishe ngo-5% endaweni ngayinye, isuka kububanzi bamanje obungu-35,01mm iye ku-36,73mm nobude obungu-36,24mm iye ku-38,21. .XNUMXmm
Ama-schematics we-iPhone 14 Pro encane nawo akhululiwe namuhla. Ngokusekelwe kulezi zinhlelo, i-iPhone 14 Pro icishe ifane ne-iPhone 13 Pro ngobubanzi ngama-71,45mm uma iqhathaniswa no-71,5mm kule yamanje. I-iPhone 14 Pro ukuphakama nayo izohlala ingashintshile uma iqhathaniswa ne-iPhone 13 Pro, ekala i-147,46mm vs. 147,5mm Njenge-iPhone 14 Pro Max, i-iPhone 14 Pro izophinde ibe ne-a ukugqama kwekhamera okukhulu, iza ngo-4,17mm uma iqhathaniswa ne-3,60mm ku-iPhone 13 Pro yamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 14 » Imidwebo ye-iPhone 14 Pro ikhombisa ukuthi iyajiya